आँखाको भाषा | मझेरी डट कम
editor — Mon, 05/30/2016 - 03:59
हाम्रा लागि त्यो घर अपरिचित थिएन । हामी त्यो घरमा जान थालेको धेरै भइसकेको थियो । त्यो घरको चहलपहल बाहिरबाटै देखिन्थ्यो । त्यो घर–परिवारमा सबैको सक्रियता र व्यस्ततालाई घरभित्र र बाहिरको चहलपहलले पनि बताउँथ्यो ।
तर, त्यस दिन त्यहाँको वातावरण अलि बेग्लै थियो । बाहिर कुनै चहलपहल थिएन । सधैँ व्यस्त रहने घरका सदस्यहरू पनि घरबाहिर देखिएनन् । लगभग सुनसान अवस्था । हामीले सोच्यौँ, चाडबाडको बाहिरी व्यस्तताले होला ।
हामी घरको आँगनमा पुग्यौँ । घरको भुइँतला र माथ्लो तल्लाका ढोका खुलै थिए । झ्यालहरू पनि खुलै थिए । बाहिरतिर कोही नदेखिए पनि घरभित्र कोही छ भन्ने आभास हामीलाई भयो । केहीबेर हामी आँगनमै उभिएर यताउति नियाल्न थाल्यौँ । माथ्लो तलामा कसैले खोकेको आवाज आयो । हामी खोकीको आवाजलाई पछ्याउन थाल्यौँ ।
मित्र गोविन्द वर्तमान मूल्यांकनमा काम गर्थे, म एक्काइसौँ शताब्दीमा । कुनै बेला यी दुवै म्यागेजिन चर्चामा थिए । विशेष गरी वामपन्थी पाठकका लागि यी म्यागेजिन पाठ्यपुस्तक जस्तै थिए ।
यी दुवैको स्तर र बिक्री राम्रै मानिन्थ्यो । तर, अहिले यी दुवै बन्द भइसकेका छन् ।
दसैँअगाडि निस्कने पत्रपत्रिकाले दसैँको फुर्सदमा अध्ययनका लागि साहित्यिक रचनाहरू समावेश गर्ने प्रचलन पहिलेदेखि थियो । त्यही प्रचलन अनुसार मूल्यांकन र एक्काइसौँ शताब्दी दुवैले दसैँ अंकमा विशेष सामग्रीका रूपमा साहित्यिक रचनाहरू पनि समावेश गरेका थिए । संयोग नै भन्नुपर्छ, यी दुवै म्यागेजिनमा रमेश विकलका रचना प्रकाशित थिए ।
चाबहिलका हामी केही साथी ’३०को दशकदेखि नै पत्रकारितासँग जोडिएका थियौँ । यो यात्रा साहित्यिक पत्रकारिताबाट सुरु भएको थियो । पछि यो यात्रा विभिन्न साहित्यिक पत्रिका र खबर पत्रिकासँग पनि जोडियो । कुनै पनि साहित्यिक पत्रिकामा कथा विधाको रचना माग्नुपर्दा हामी रमेश विकललाई सम्झन्थ्यौँ । त्यति बेलादेखि नै हामी नयाँ सडकको गीतलाई मापदण्ड बनाएर नेपाली साहित्यका सर्वश्रेष्ठ कथाकार मान्थ्यौँ उहाँलाई । त्यसैले पनि हामी संलग्न रहेका कतिपय पत्रिकामा उहाँको रचना राख्नैपर्ने हठ हामी गर्थ्यौं ।
रमेश दाइलाई पत्रिका र पारिश्रमिक दिनु थियो । दसैँअगाडि नै पारिश्रमिक पाउँदा रमेश दाइ खुसी हुनुहोला भन्ने पनि लाग्यो । गोविन्द वर्तमान र मैले भोलिपल्ट बिहानै रमेश दाइकहाँ जाने सल्लाह गर्‍यौँ ।
सधैँ एक–डेढ घन्टाको मर्निङ वाक गर्ने गोविन्द वर्तमान त्यस दिन मर्निङ वाकमा गएनछन् । चाबहिलबाट हिँडेर आरुबारी जाने र हिँडेरै फर्किने विचारले उनले त्यस दिनको मर्निङवाकको गन्तव्य आरुबारीलाई बनाएका रहेछन् । हामी चाबहिल चोकबाट आरुबारीतिर लाग्यौँ । चाबहिल, चुच्चेपाटी, महांकाल, रामहिटी, तीनचुले हुँदै एक घन्टाभित्रै रमेश दाइको घरमा पुग्ने हाम्रो योजना थियो । हामी आफ्नो योजनामा सफल रह्यौँ । ५५ मिनेटमा हामी रमेश दाइको घरमा पुग्यौँ ।
‘दाइ नमस्कार !’ कोठाभित्र छिरेर हामी दुवै जनाले दुई हात जोड्दै भन्यौँ । तर, उहाँले नमस्कार फर्काउनु भएन । अरू कुनै प्रतिक्रिया पनि जनाउनु भएन । एक शब्द बोल्नु पनि भएन । उहाँलाई खोकी पनि लागिरहेको रहेछ । हामीले सोच्यौँ, सञ्चो नभएर होला ।
उहाँले हातले इसारा गरेर हामीलाई बस्न भन्नुभयो । उहाँको मुखमुद्रा नै बेग्लै थियो । उहाँको अनुहार क्रोधले भरिएको हो कि पीडाले, केही बुझ्न नसकिने खालको थियो । मलिन मात्र होइन, अलि अँध्यारो पनि ।
हामी डराइडराइ उहाँको अगाडि गएर बस्यौँ । उहाँको मुखबाट अँझै पनि कुनै शब्द व्यक्त भइरहेको थिएन । उहाँको अनुहारको भाव बुझ्न हामीलाई निकै गाह्रो परिरहेको थियो ।
“दाइलाई सञ्चो छैन जस्तो छ,” मैले भनेँ ।
“यस्तै त हो,” निराशाजनक पारामा उहाँ बोल्नुभयो ।
“दाइ निकै गल्नु भएछ,” गोविन्द वर्तमानले थपे ।
“अँ, गल्ने त बेलै हो,” फेरि पनि निराशाजनक भावमा उहाँ बोल्नुभयो ।
हरेक भेटमा ‘के छ ?’ ‘के गर्दैछौ ?’ भनेर सोध्ने रमेश दाइले त्यस दिन त्यस्ता कुनै प्रश्न गर्नु भएन । उहाँको प्रतिक्रियारहित मौनतामा हामी पनि केहीबेर मौन बस्यौँ । मौनतालाई तोड्दै विजय चालिसे आइपुग्नुभयो । छोटो कुराकानीपछि उहाँ निस्कनुभयो । त्यतिबेलासम्म पनि रमेश दाइको मौनता यथावत् नै थियो ।
हामीले एक/एक प्रति पत्रिका र पारिश्रमिक रमेश दाइलाई दियौँ । उहाँले पत्रिका र पैसा हातमा लिनुभयो । तैपनि, केही बोल्नुभएन । पत्रिका पल्टाएर हेर्ने जाँगर पनि उहाँले देखाउनुभएन । तैपनि, उहाँका आँखा हामीतिरै एकोहोरिएका थिए । हामी पनि केही अनौठो अनुभव गर्दै रमेश दाइको अनुहारतिर हेरिरहेका थियौँ । हेर्दाहेर्दै रमेश दाइका आँखा रसाए । फुस्रा आँखा एकैछिनमा रसिला देखिए । आँखामा आँसु भरिँदै गयो । हामी अलमलमा पर्‍यौँ । हामीले तत्कालै उहाँका आँखाको भाषा बुझ्ने प्रयत्न गर्‍यौँ तर सकेनौँ । मौनतामै उहाँको अनुहारतिर नियालिरह्यौँ ।
जुन बेला रमेश दाइ जागिरदार हुनुहुन्थ्यो, त्यतिबेला चाबहिल चोक उहाँको दैनिक विश्रामको ठाउँजस्तै थियो । अफिसबाट घर फर्कंदा उहाँ लगभग साँझसम्मको समय चाबहिलमै बिताउनुहुन्थ्यो । त्यो पनि धन दाइको होटल वा त्यसवरपर । कहिले आलु र जेरी खाँदै, कहिले चिया खाँदै । दैनिक एउटा–दुइटा पेडा वा बर्फी किन्नकै लागि पनि उहाँ धन दाइको होटलमा आइपुग्नु हुन्थ्यो ।
चाबहिल चोकमा रमेश दाइलाई देख्दा हामी हरेक दिन गौरवान्वित हुन्थ्यौँ । रमेश विकलजस्ता ठूला व्यक्तित्वका अगाडि आफूलाई उभ्याउन पाउँदा आफ्नो मान र सान दुवै बढेको अनुभव हामीलाई हुन्थ्यो । उहाँसँगको निरन्तरको भेटघाट र कुराकानीका लागि जोड्ने एउटा माध्यम उत्साह साहित्यिक त्रैमासिक पनि बनेको थियो । चाबहिलबाट प्रकाशित हुने यो त्रैमासिकमा सुरुमा उहाँ नै प्रधान सम्पादक हुनुहुन्थ्यो । पछिल्लो कालमा यसमा पारिजात, खगेन्द्र संग्रौला, आनन्ददेव भट्टलगायत धेरैको संलग्नता रह्यो । उत्साहकै नाममा नियमित साहित्यिक गोष्ठी पनि सञ्चालन भएको थियो । यसले पनि रमेश दाइसँग धेरैको आत्मीयता बढाएको थियो । कुनै दिन उहाँ चाबहिल चोकमा देखिनुभएन भने ‘आज रमेश दाइ कता जानु भएछ ?’ भनेर प्रश्न गर्नेहरू धेरै हुन्थे ।
जागिर छोडेपछि पनि उहाँ चाबहिल आइरहनु हुन्थ्यो । तर, पहिलेको जस्तो दैनिक होइन । विभिन्न कारण चाबहिल–आरुबारी आवतजावतको क्रम क्रमश: अनियमित बन्दै गयो । उहाँ यदाकदा, कुनै विशेष काममा मात्र चाबहिल आउन थाल्नुभयो । दोस्रो जनआन्दोलनपछिको अवस्थामा चाबहिलमा उहाँको उपस्थितिको अनुभव कसैले गर्नै पाएनन्भन्दा पनि हुन्छ । उहाँ उमेर र स्वास्थ्यका कारण धेरै हिँडडुल गर्न नसक्ने हुनुभयो । महिनौँपछि मात्र उहाँसँग भेट हुन थाल्यो । यसपटक पनि लामै समयपछि हामी उहाँको घरमा पुगेका थियौँ ।
रमेश दाइ आ–आफ्नो स्वार्थवश भेट्न आउनेहरूसँग दु:खी हुनुभएको थियो वा हामी पारिश्रमिक र पत्रिकासहित एकाबिहानै पुगेकामा खुसी हुनुभएको थियो ? उहाँका रसाएका आँखाको भाषा बुझ्न हामीलाई निकै गाह्रो पर्‍यो । उहाँको दु:खी अनुहार नियाल्दै हामी चुपचाप बसिरहेका थियौँ । उहाँका आँखा ओभानो बन्ने क्रममै थिए । २०/२५ मिनेटपछि बल्ल रमेश दाइ बोल्नुभयो, “आज कहाँबाट तिमीहरूले बाटो बिराएछौ, खुसी लाग्यो ।”
रमेश विकलले आफ्नो बिग्रँदै गएको स्वास्थ्यका बारेमा बताउनु भयो । त्यही सिलसिलामा उहाँले हामीप्रति व्यंग्य गर्दै भन्नुभयो, “म अशक्त भएर चाबहिलतिर आउन नसक्ने, तिमीहरू सशक्त भएर पनि आरुबारीतिर आउन नसक्ने । अब त भेटघाट भन्ने कुरा पनि त्यस्तै त्यस्तै होलाजस्तो छ । जे कुरा पनि आफू सक्रिय रहुन्जेलका लागि मात्रै त रहेछ !”
रमेश दाइ अस्वस्थ्यताका कारण बोल्न गाह्रो मानिरहनु भएको होइन रहेछ भन्ने अब स्पष्ट भयो । बिरामी अवस्थामा, डाक्टरले धेरै बोल्नुहुन्न भनेको बेलामा पनि उहाँ बोल्याबोल्यै गर्नुहुन्थ्यो । उहाँको यो बानीसँग हामी पहिले पनि जानकार थियौँ । एकपटक उहाँ रक्तचापका कारण निकै गम्भीर अवस्थामा शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्जमा भर्ना हुनुभएको थियो । उहाँलाई भेट्न हामी चार जना राजव, अग्निशिखा, गोविन्द वर्तमान र म अस्पताल पुगेका थियौँ । आइसीयूबाट क्याबिनमा सर्नुभएका रमेश दाइ हामीसँग बोल्याबोल्यै गरेको देखेर हामी त्यहाँबाट चाँडै हिँडेका थियौँ । यहाँसम्म कि बिदा भएर ढोकाबाट बाहिर आइसकेका राजवलाई फेरि बोलाएर रमेश दाइले साझा प्रकाशनका बारेमा सोधखोज गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला राजब साझा प्रकाशनका निर्वाचित सञ्चालक भएकाले रमेश दाइले केही कुरामा चासो राख्नुभएको थियो । तर, यसपटक स्वास्थ्य ठीकै भए पनि उहाँमा कुनै उत्साह र जाँगर थिएन । उमेरको बोझसँगै रोगले थिचेर उहाँ झन्झन् कमजोर बन्दै जानुभएको कुरा स्पष्ट थाहा हुन्थ्यो । तैपनि, बोल्नै गाह्रो हुने अवस्थामा उहाँ हुनुहुन्नथ्यो ।
आधा घन्टापछि हामीले रमेश दाइको लेखन र दिनचर्याका बारेमा सोध्यौँ । उहाँले आफ्नो आत्मकथा लेखनका कुरा, रमेश विकल प्रतिष्ठानको निर्माण, पूरा हुन बाँकी केही लेख–रचनाका विषयमा सामान्य कुरा गर्नुभयो । त्यति धेरै खुलेर बोल्नुहुने रमेश विकल आज किन सामान्य जवाफ दिन पनि गाह्रो मानिरहनु भएको छ ? हामीले उहाँका आँखाको भाषा त बुझ्न सकिरहेका थिएनौँ भने मनको भाषा कसरी बुझ्ने ?
सामान्य कुराकानीमै डेढ घन्टा बित्यो । गोविन्द छटपटाउन थाले । चुरोटको तलतलले उनको धैर्य अघि नै टुटिसकेको थियो । म रमेश दाइका आँखाको भाषा बुझ्ने प्रयत्न गरिरहेको थिएँ । गोविन्द भने मेरो प्रयासलाई बेकार मानिरहेका थिए ।
“अब हामी जान्छौँ दाइ,” बसेको ठाउँबाट उठ्दै गोविन्दले भने । रमेश दाइले गोविन्दको अनुहारतिर हेर्दै निराश पारामै भन्नुभयो, “हुन्छ ।”
गोविन्द वर्तमान उठेर हिँड्ने तरखरमा लागिसकेकाले म पनि उठेँ । आफ्नो अनुहारको कान्ति र तेजलाई लुकाएर चुपचाप बसिरहनु भएका रमेश दाइले उठ्दै भन्नुभयो, “तिमीहरू गइहाल्छौ त ?”
“जति बसे पनि यस्तै हो । अब जाने दाइ ।” गोविन्दले त्यहाँबाट हिँड्ने कुरालाई जोड दिँदै जवाफ दिए ।
हामीसँगसँगै रमेश दाइ पनि बाहिर निस्कनुभयो । आँगनमा उभिएर हामीले बिदा माग्ने क्रममा उहाँको अनुहारतिर हेर्‍यौँ । उहाँका आँखा फेरि पनि रसाएका थिए । हामी फेरि पनि अलमलमा पर्‍यौँ । न रमेश दाइ केही बोल्नुभयो, न हामी नै केही बोल्न सक्यौँ । एकैछिन हामी सबै त्यत्तिकै उभियौँ ।
“जान्छौ त, ल जाओ है,” यति भनेर रमेश दाइ फरक्क फर्किनुभयो । उहाँका आँखामा छिनछिनमा देखिने आँसु खुसीको हो कि दु:खको ? फेरि पनि हामीले उहाँका आँखाको भाषा बुझ्न सकेनौँ । रमेश दाइ घरभित्र छिर्नुभयो । हामी आफ्नो बाटो लाग्यौँ ।
प्रकाशित: चैत्र ११, २०७२
बुकी फूल फुल्दा म फुलें लेकमा
‘समयलाई सलाम’ भित्रका स्रष्टा धीरेन्द्र प्रेमर्षिको गजलकारिता
ईश्वर झै मान्दै हुनुहुन्थ्यो
साँढेको सोमत कहिल्यै आउँदैन
जुनी काट्नु - एउटा बाजी
जानु छ धेरै धेरै टाढा तिमी र म
चार मुक्तक (कोही भन्छन् मुक्तक)
बिरे को कथा
उपन्यासभित्र अनेक उपन्यास
तीन मुक्तक (मनको मझेरीमा)
अनेसास नवोदित दोस्रो वाचन शृंखला सम्पन्न
चार मुक्तक (तिम्रो रुपको बुँइगलमा)
सप्ना साकार पार्नलाई जुट्नु पर्छ आफैँ
जीवनको हरेक मोडमा
आधा भए म रित्तो भए